Dowlada oo sheegtay in qofkii maanta isku qarxiyay madaxtooyada uu hore uga tirsanaa ciidamada nabadsugida Wasiirka w – idalenews.com
Dowlada oo sheegtay in qofkii maanta isku qarxiyay madaxtooyada uu hore uga tirsanaa ciidamada nabadsugida Wasiirka w
Wasiirka warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya C/laahi Ciilmooge Xirsi ayaa ka hadlay qarax maanta ka dhacay albaabka laga galo xarunta madaxtoyada ee magaalada Muqdisho.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiska R/wasaaraha ayuu wasiirka warfaafinta Cabdullahi Ciilmooge ku tilmaamay qaraxii maanta inuu ahaa mid ay fashiliyeen ciidamada ammaanka kadib markii ay askari ka mid ah ciidamada ilaalada ka ah afaafka laga soo galo madaxtoyada uu toogtay qofkii doonayay in uu gudaha u galo xarunta madaxtooyada.
Ninka isqarxiyay ayuu ku tilmaamay wasiirka warfaafinta in uu hore uga tirsanaa ciidamada nabadsugida balse iminka shaqadii laga ruqseeyay xilliga uu qaraxa ismiidaaminta ah uu fulinayay.
Wasiirka warfaafinta Cabdulahi Ciilmooge ayaa sheegay in qaraxan uu ku dhintay hal ruux saddex kalana ay ku dhaawacmeen, waxana uu wasiirku ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen ururka Alshabaab oo ku sheegay in ay yihiin kooxo nabad diid ah.
Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya iyo safaarada Ethiopia ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Iyadoo uu wasiirka warfaafinta dowlada uu ku sheegay qasaaraha dhimashada ee ka dhashay qaraxan uu ahaa dhimashada hal ruux ayaa hase ahaatee waxa ay warar kale sheegayaan in ay illaa iyo shan ruux ay gaareyso dadkii ku dhintay qaraxan,
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weerarkan is miidaaminta ah ee geystay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu furan yahay suuqa Bacadlaha ee dagmada X/weyne
Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan kula leh Dalka Belgium Madax ka tirsan Midowga Yurub